ब्रान्डी प्रकार-उद्योग समाचार-गोलोंग लिकर (समूह)
ब्रान्डी भनेको के हो?
ब्रान्डी एक आसुत मदिरा हो, "आत्माको वाइन" भनेर चिनिन्छ, विश्वको आठ रक्सी मध्ये एक हो। फललाई कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, किण्वन, आसवन, र ओक ब्यारेल भण्डारणको माध्यमबाट। सामान्यतया ब्राण्डी अpe्गुरलाई कच्चा माल, किण्वन र आसवन, पियक्कड वाइनको भण्डारणको रूपमा दर्साउँछ। अन्य ब्रान्डि उही तरीकाको साथ आसुत तर विभिन्न कच्चा मालहरूले कच्चा मालको नाम राख्नु पर्छ भेरी देखाउन, जस्तै चेरी ब्रान्डी, एप्पल ब्रन्डी।
त्यहाँ धेरै देशहरुमा बिभिन्न ब्रान्डी छन्, तर फ्रेन्च ब्रान्डी सब भन्दा राम्रो छ। फ्रान्सेली ब्रान्डीको बीचमा, कन्ग्नाक क्षेत्रमा उत्पादनको राम्रो गुण छ। Armagnac क्षेत्र द्वारा पछ्याइएको। त्यहाँ अन्य देशहरू पनि प्रसिद्ध ब्रान्डी उत्पादन गर्दछ जस्तै स्पेन, इटाली, पोर्चुगल, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि।
ब्रान्डी कच्चा मालको बिभिन्न स्रोतका कारण ब्रान्डीलाई कोग्नाक, आर्मग्न्याक, फ्रान्सेली ब्रान्डी, अन्य देशहरुमा ब्रांडी र अंगूर पोमेस ब्रान्डी, फल ब्रन्डीमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
कोग्नाक, उत्तरी फ्रान्स चरेन्टेको बोर्डो प्रान्तमा अवस्थित एउटा सानो शहर हो। फ्रान्सेली सरकारको नियमहरु, ब्रान्डि केवल Charente को इलाका मा उत्पादन कोग्नाक नाम दिन सकिन्छ। यस बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा "कोग्नाक" द्वारा नाम दिन मिल्दैन। कोग्नाक कच्चा माल प्राय: लामो परिपक्वता, सेतो अpe्गुर प्रजातिहरूको प्रतिरोध रोग फgi्गाको साथ उच्च अम्लता प्रयोग गर्दछ।
२, फ्रेन्च ब्रान्डी
कोग्नाक र आर्मग्न्याक बाहेक, सबै फ्रान्सेली अpe्गुर वाइनलाई ब्रान्डी भनिन्छ। उत्पादन प्रक्रियामा, फ्रान्सेली सरकारसँग धेरै नियम हुँदैन, सामान्यतया बिक्री अघि लामो समय परिपक्व हुनु आवश्यक पर्दैन।
,, मार्क ब्राण्डी
फ्रान्सेलीमा "मार्क" भनेको फोहोर हो, किनकि यस प्रकारको ब्रान्डीलाई अंगूर ब्रान्डी पनि भनिन्छ। मार्क ब्रान्डीलाई किण्वित अंगूर पोमेसबाट आसिल गरिन्छ र त्यसपछि उच्च मदिरा सामग्री, फिल्टर बाहिर फोरल ब्याक।
,, एप्पल ब्रान्डी
एप्पल ब्रान्डी भनेको स्याउको जुसलाई स्याउको जुसमा निचोरेर निकालिन्छ र त्यसपछि त्यसलाई आसुत गरिन्छ र फल ब्रन्डीमा पकाइन्छ। मुख्यतया फ्रान्सको उत्तरमा, अमेरिका, युके र स्याउको अन्य देशहरू। विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात काल्भाडोस फ्रान्सेली नर्मन्डी कलभाडोसमा उत्पादन गरिन्छ। फ्रेन्च Calvados दाखमद्य को सामान्य उत्पादन बिक्री को लागी १० बर्षको हुनु पर्छ।
,, चेरी ब्रान्डी
फेर्नु भन्दा पहिले चेरी ब्रान्डी पेडीसेल हटाउनुपर्नेछ, र निचोरेर फलको रसलाई किण्नको लागि, त्यसपछि डिस्टिल गर्नुहोस्। फ्रान्स, जर्मनी, स्विजरल्याण्डको पूर्वी यूरोपको मूल उत्पत्ति।
अघिल्लो: ग्लुटन फ्री भोडका के हो?
अर्को: भोड्का टोनिक